Waa Kuma Laacibka Caanka Ah Ee MUSHAKIGA Ah Ee Kaamirooyinka Qarsoon Ku Xidhay Gurigiisa Si Uu Xaaskiisa U Basaaso? - Gool24.Net
Waa Kuma Laacibka Caanka Ah Ee MUSHAKIGA Ah Ee Kaamirooyinka Qarsoon Ku Xidhay Gurigiisa Si Uu Xaaskiisa U Basaaso?
Laacibka difaaca uga ciyaara xulka qaranka England iyo kooxda kubadda cagta Manchester City ayay boolisku la hadleen, si ay su’aalo uga weydiiyeen eedaymo ay usoo jeedisay gacalisadiisii hore oo ay ka mid yihiin in guriga uu ugu xidhay kaamirooyin qarsoon oo uu ku basaaso.
Millie Savage oo ay da’deedu tahay 25 jir ayaa booliska wacday markii ay heshay farriin qoraal ah oo loogu sheegayo in xiddiga Manchester City uu ka war-hayo dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka samayso guriga qasriga ah ee uu leeyahay oo uu ku iibsaday lacag dhan £6 milyan.
Millie ayaa booliska u sheegtay in gebi ahaanba aanay ogeyn kaamirooyinka, saygeeduna aanu u sheegin, taasina ay tahay mid iyada lagu basaasayaya.
“Millie kalideed ayay ahayd, waxaanay ka baqaysay in la daawan jiray. Waxay dareentay in la dayacay.” Sidaas waxa wargeyska The Sun u sheegay ilo-wareedyo ka agdhow Millie.
Ciidanka booliska ayaa booqday guriga Stones dhamaadka bishii hore, waxaanay talooyin siiyeen Millie oo ah hooyo haysata gabadh yar oo saddex sannadood jirta.
“John wuxuu ka guuray guriga markii ay isku dhaceen laakiin wali wuxuu awood u leeyahay inuu maamulo kaamirooyinka guriga ku xidhan isaga oo adeegsanaya Internet-ka” Ayay ilo wareedyadu tibaaxeen.
“Millie waxay heshay qoraal muujinaya in John uu ka war hayo cid kasta oo guriga soo gelaysa ama ka baxaysa. Waxay dareentay in la kormeerayo, si cad ayaanay u walaacday.”
Arrintan oo dhacday bishii hore, waxa uu wargeysku sheegay in Millie ay la xidhiidhay booliksa Cheshire Police, waxay se saraakiishii guriga timid ku qanceen in aanay jirin wax dhibaato ah oo loo geystay iyo tallaabooyin dheeraad ah oo ay ka qaadayaan difaaca Manchester City.
Stones iyo Millie ayaa noloshoodu ay tahay mid khilaafyo hadheeyeen, waxaana hore loo ogaa isku-dhac weyn oo lala socday oo sannadkii 2018 bannaanka usoo baxay, xilligaas oo ahayd inyar kaddib markii ay kasoo laabteen koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka.